ဟော့ကင်းနာမည်ကြီးလာပုံ | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
Posted on March 31, 2014 by chitnge
ဟော့ကင်းသည် (A Brief History of Time) စာအုပ်ကို ရေးသားပြီးနောက် နာမည်ကြီးလာသည်။ ဟော့ကင်းနာမည်ကြီးလာရသော အချက်အလက်များတွင် သူသည် သိပ္ပံပညာတို့၏ အခြေခံ အကျဆုံးသော ဘာသာရပ်ကို လေ့လာလိုသည်ဟု ကြွေးကြော်ခဲ့သည်။ ယင်းကိုသူက ရူပဗေဒ ပညာရပ်ဟု သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ဤကားသူ့သဘောထားနှင့် သူ့အဆုံးအဖြတ်ပင်ဖြစ်သည်။
(– I wanted to do research in physics because it was the most fundamental science.)
သူ၏ စိတ်ဝင်စားခြင်းဆိုင်ရာ ပညာရပ်များမှာ
(Where we came from?)
(– then why we were here?)
ကျွန်တော်တို့ ဒီကိုဘာကြောင့် ရောက်နေရတာလည်း?
ဒီအမေးများကို စိတ်ဝင်စား ဖြေဆိုရန် ကြိုးစားရင်း ဟော့ကင်းသည် နာမည်ကြီးလာသည်။
စကြဝဠာ ဖြစ်ပေါ်လာရပုံမှာ သိပ္ပံ၏ ဥပဒေသဆိုင်ရာ သဘောထားအတိုင်း ဖြစ်လာရသည်ဟု ဟော့ကင်းက ယူဆခဲ့သည်။ ဟော့ကင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ စကြဝဠာဘယ်လိုဖြစ်လာသည် ဟူသောသဘောပင်ဖြစ်၍၊ ထိုရည်ရွယ်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍မူ သူသည်အောင်မြင်ခဲ့သည်ဟု့ ဝန်ခံခဲ့သည်။ သို့သော် –
(But I still don’t know why it began.)
ဒါပေမယ့် ယခုထက်တိုင် သူဘာကြောင့် ဖြစ်လာရသည် ဆိုသည်ကို မသိသေးပါဟု ဟော့ကင်းသည် သူ၏ (Black holes and Baby Universes) စာစုတို့တွင် ထုတ်ဖော်ဝန်ခံခဲ့သည်။
(This singularity would be an end of time.)
ဟော့ကင်းသည် အမှတ်ထူးအကြောင်းကို ကောင်းစွာသရုပ်ဖော်နိုင်ခဲ့သည်။ အမှတ်ထူး ဖြစ်ပေါ်လာပုံနှင့် မည်သို့မည်ပုံ တည်ရှိနိုင်ပုံကို စကြဝဠာဆိုင်ရာ ရူပဗေဒ အမြင်ဖြင့် ကောင်းစွာတင်ပြနိုင်ခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ထိုအမှတ်ထူးတွင် အချိန်သည် ကုန်ဆုံး သွားရပေလိမ့်မည်ဟု သူသည် ကောက်ချက်ချ ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့သည်။ အမှတ်ထူးနှင့် ပတ်သက်၍မူ သူသည် တော်တော်လေး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ တင်ပြနိုင်စွမ်း ရှိခဲ့သဖြင့် အထူးနာမည်ကြီးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ယူဆနိုင်ပါသည်။
Tags: Black Holes, Myanmar Posts, ဟော့ကင်း
This entry was posted in Articles and tagged Black Holes, Myanmar Posts, ဟော့ကင်း. Bookmark the permalink.